Kooxaha LL.PP Jeenyo iyo Sahafi oo Galabta ku Kala Tagay 1-1 Daawo Sawirro - iftineducation.com
Kooxaha LL.PP Jeenyo iyo Sahafi oo Galabta ku Kala Tagay 1-1 Daawo Sawirro
aadan21 / June 6, 2012
Horyaalka Somalia: LL.PP Jeenyo iyo Sahafi
iftineducation.com – Waxaa galabta ciyaar xiiso badan ku dhexmary garoonka jamacadaha labadda kooxaha ee Jeenyo iyo Sahafi taas oo aheed kulan aad u siixo badnaad marka la eego ciyaartii shalay dhacday.
Garoonka ayaa waxaa galabta ka soo qeyb galay tageerayaal aad u farabadan kuwaaso oo kala tageerayaya labada naadi waa Jeenyo iyo sahafi marka la eego sida ay usoo bandhigeen labada koox banooniga taas ayaa waxeey soo jeedasho galisay dadkii usoo dawasho tagay kulankaan.
Ciyaarta ayaa waxeey ku bilabatay weerar iyo weerar celis waxaa la isku sigay banooniyaal aad u qatarsanaa balse waxaa naadiga LL.PP Jeenyo usuurta gashay daqiiqadii 15 in ay dhaliso gool aad u qurxonaa waxaana dhalshay laacibak lagu magacaabo Nuur Deeq Abdi maxudiin oo ciyaarta ka dhigay 1-0 oo ay ku hugamineysay naadiga Jeenyo.
Haafkii hore ee ciyaarta ayaa sidaas lagu kala nastay hase yeshee naadiga sahafi waxeey isku soo dharsadeen in ay soo barejeeyaan goolka lagu leeyahay taasna waxeey noqotay mid rumowda daqiiqadii 50 ee haafkii dambe ayaa waxaa suurta gashay naadiga Sahafi in ay dhaliso gool barbarada ahaa waxaana dhalshay kabtanka naadiga laacibka lagu magacaabo Bile Muxidiin Buraale oo ciyaarta ka dhigay 1-1.
Si kastaba ha noqotee ciyaarta ayaa waxeey sii noqotay mid xamasadeeda ay sii kacdo madaama ay tahay mid bareejo ah labada koox waxeey isku qadeen weeraro la dhihi karay waxaa ku dhalan karay goolal balse taas ma suurta galin waxaana ciyaarta ay kusoo idlaatay 1-1 mana jirto cid ay raacday guusha.
Daawo Sawirada Madaxweyne Shariif oo Aalmiiteenaya iyo ,R/Wasaare Gaas iyo Farmaajo oo iyana kubad Ciyaaraya